‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को जजबाट आस्थालाई हटाइ गायिका तृष्णा गुरुङलाई राखेपछि आस्थाले दिईन यस्तो प्रतिकृया – Wow Sansar
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को जजबाट आस्थालाई हटाइ गायिका तृष्णा गुरुङलाई राखेपछि आस्थाले दिईन यस्तो प्रतिकृया
January 17, 2021 107
रियालिटी शो ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल ३’को जज परि’वर्तन भएपछि सामा’जिक सञ्जा’लमा विभिन्न खाले टिकाटिप्पणीहरु चल्न थालेका छन्। भ्वाइसको दोस्रो सिजनमा जजको भुमि’का निभाएकी आ’स्था राउत सिजन ३ मा नआउने भए’पछि दर्शक’हरुको मनमा कौ’तुहलता छाएको छ।
सांगितिक मा’होलमा हु’र्किएकी आस्थाले राम्रो जजको भुमि’का निभाएको भन्दै हटाइए:कोमा आजो’जकप्रति शंका उत्पन्न गराएको चर्चा पनि सामाजिक सञ्जा:लमा देखिएको छ। गायिका आस्था राउ’तले कामका चापले गर्दा आफुले भ्वाइस अफ नेपा’लको टिमबा’ट बाहि’रिनु परेको बताएकी छन्।’
उनले व्यत्तिगत काम ब्यस्त भएको का’रण, भ्वाइसको सल्लाहमा नै बाहि’रिएको बता’एकी छन्। उनले भनिन्,‘ म भ्वाइस’बाट बाहिरिदा यसमा कुनै पनि शंका छैन। लकडा’उनका कारण मेरा धेरै कामहरु रोकि’एका छन्। पर्सनल कामहरु देखि अन्य कामहरु पेन्डिङ भ’एका कारण भ्वाइ’सलाई समय दिन न’सक्ने भए ।
त्यसैले म बाहि’रिएको हो।’हक्कि स्वभा’वकी आस्थाले कुनै मन मुटाव’का कारण आफुले भ्वाइस नछोडेको बताईन । उनले भनिन्‘ भ्वा’इसको मिटि’ङमा मेरो व्यत्तिगत तथा अन्य काम भएका कारण यो सिज’नमा काम गर्न कठिनाई भएको प्रस्ता’व राखेको हो। उहाँह’रुले निकै समयको डि’सिजन पछि बिदा दिनु’भएको हो। ’
Prevआँपगाछीमा मोटरसाइकल र ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा विक्रमको ज्या,न गयो
Nextअर्काको नाममा रहेको सिमकार्ड चलाउनुहुन्छ ? आफ्नो नाममा यसरी नामसारी गर्नुहोस्
पल्सर मोटरसाइकलको मूल्य घट्यो
२३ वर्षको उमेरमा नै ११ बच्चा जन्माइसकेकी युवती १०० बच्चा जन्माउन चाहन्छिन्,यस्ताे छ बच्चा जन्माउन लत लाग्नुकाे कारण। २३ वर्षकी एक युवतीलाई बच्चा जन्माउने ल-त लागेको छ ।
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3477)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1246)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1155)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (1094)
महान श्रीमान भनिएका बिनोद खड्काले पत्नि अनिता खड्कालाई धोका दिँदै अर्की महिलासँग गरे विबाह, बिनोदले अर्कैसँग विबाह गरेपछि हेर्नुहोस् के के भयो ? (1010)